Natiijo-Kooxaha Kubbadda Cagta L.L.P Jeenyo Iyo Som United Oo Barbaro Ku Kala Baxay – Goobjoog News
Kooxaha kubbadda cagta L.L.P Jeenyo iyo Som United ayaa wada dheelay kulan ciyaareed saaxiibtinimo iyo is-dhaxgal bulsho waxaana ciyaartan kasoo qeyb galay xidigihii hore kubbadda cagta iyo Kolayga ee Jeenyo.
Qeybta kowaad waxaa lagu kala maray barbaro 1-1,xili labada dhinac ay soo bandhigeen ciyaar ku dheehan farsamo oo si weyn usoo jiidatay taageerayaashii ku sugnaa tarabuunka garoonka Banaadir ee degmada Cabdi Casiis.
“Waan u qalanay guusha xidigahayga waxa ay soo bandhigeyn ciyaar ku dheehan weerar iyo farsamo,balse Natiijada ayaa kusoo idlaatay waa in aan sii wadnaa shaqooyinka caadiga iyo isku diyaarinta tartmada inagu soo wajahan”waxaa Goobjoog sidaas u sheegay Axmed Tahliil Cali oo layliyahay kooxda kubbadda cgata L.L.P Jeenyo.
Qeybta labaad kooxda Jeenyo ayaa la wareegtay hogaanka waxayna ciyaarta isku badashay 2-1,balse dhamaadkii kulanka wiilasha Som United ayaa helay goolkii barbaraha wuxuuna kulanka kusoo idlaaday 2-2 ay ku kala baxeyn Som United iyo L.L.P Jeenyo.
“Kulankii ugu adkaa aan ku ciyaarno Muqdisho waxaa la yeelanay dhigeena Jeenyo waxa ay soo bandhigeyn kubbadda cajiib ah labada dhinac waxa ay kala faa’ideyn wax badan oo horomar u ah horomarinta kubbadda cagta dalka”Maxamed Cabdiqaadir oo layliyaha Som United ayaa sidaas ugu waramay Goobjoog Sports.
Bashiir Cilmi Maxamed (Bashiir Jeenyo) iyo Cabdiqani Cabdullahi Hilolwe (Cabdiqani Jeenyo) oo ka mid ahaa laacibintii usoo dheelay kubbadda cagta iyo kolayga ayaa xaadir ku ahaa garoonka,iyagoo dhiiri gelin u sameeyay xidigaha ku dheelaya magaca taariikh ah ee L.L.P waxayna ciyaarta ka dib inoo sheegeyn in ay diyaar u yihiin ka qeyb qaadashooda horormarinta naadiga Wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta ee Jeenyo.
“Anaga wuxuu ii ahaa kulan tariikh ah maadaam dhalinyarada aan ka keenay qurbaha iyo kuwa gudaha ay wada dheelaan kulan muhiim ah sidoo kale waxaan ku farax sanahay qaab ciyeed wanaagsan ay soo bandhigeyn kooxda Jeenyo oo aan aniga ka mid ahaa dadkii kusoo caan baxay dibna usoo aas aasay waxaan diyaar u ah garab istaagida magaca Qiimaha ugu leh ee Jeenyo” waxaa kulanka ka dib wariyaha ciyaaraha Goobjoog sidaas ugu waramay Bashiir Cilmi Maxamed (Bashiir Jeenyo) oo ah madaxa wafdiga kooxda Som United.
Kaliya iminka waxaa u haray kooxda Som United hal kulan oo qura waxayna ciyaartaas la dheelidoonaan naadiga Muqdisho City Club oo ku ciyaaray magaca caasimada ama Gobolka Banaadir horayna kooxda waxaa la oran jiray Banaadir SC
Halkan Ka Daawo Warbixin Ku Saabsan Kulankii Jeenyo Iyo Som United
Fwxefo faoytr Low cost viagra viagra cialis
Ivgyfm jcgvvk pharmacy online Rkciq...